Version 0.8.1 – Ọ bụghị ahụhụ! ọ bụ atụmatụ!
December 12, 2011 site na rịọ 46 Comments
Ịchụ nta chinchi na elu na uzu
Na Transposh anyị na mmadụ na anyị onwe anyị na anyị elu nzuzo ụkpụrụ, nke a pụtara na anyị nwere mba chinchi anyị software. Ee, ị nụrụ ikike a, efu chinchi okụt. Otú ọ dị – e nwere obere nsogbu, ndị ọzọ na-amasị anyị na ha n'ezie nwere chinchi ha Koodu. Ya mere, ọ bụrụ na ị wụnye Transposh na ihe na-adịghị arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi, e nwere ma eleghị anya ahụhụ WordPress, ma ọ bụ ahụhụ na isiokwu unu na-ị na-eji, ma ọ bụ onye agha ọzọ ngwa mgbakwunye, ma ọ bụ jQuery mere ụfọdụ ọgbaghara, ma ọ bụ na ị ka na-eji Internet Explorer 2 ma ọ bụ na nke a bụ ihe ndị metụtara gị na nne, ma ọ bụ nne ya, ma ọ bụ ya nne nne, ma ọ bụ ndị mbụ cell na mgbe e kere. Ọ bụ mgbe anyị na! mgbe mgbe!
Ọ bụrụ na ọ dị ihe na-adịghị arụ ọrụ ma ị akọ ya na anyị, anyị ozugbo ịhụ onye ọzọ na-ata ụta, mgbe ụfọdụ, mgbe ihe ọma na ọnọdụ, anyị n'ezie koodu ihe iji zere ndị ndị ọzọ chinchi.
Nke a na-ufụn bụ otu n'ime ndị na-a na, naanị ọhụrụ mma bụ ike ịtọ ikwu n'asụsụ ke njikwa interface (ma ọ bụrụ na mmadụ gwa Spanish mgbe n'ezie nchọgharị gị na saịtị na Bekee ma ọ bụ osote amaokwu) .
Ndị fọdụrụ nke a tọhapụ bụ:
Kwado ndụ mmadụ translations ndabere na ndabara
Akwado ， akara ke parsing (Ya abụghị rikoma, n'ezie!)
Reintroduce CORS nkwado anyị AJAX (Cross Mmalite Ajax)
Gbalịa iji jide n'aka na lazyloader ibu na ezi onodu
Idozi ngụkọta oge nke ogbe translation size zere translations oke buru ibu maka Google
Idozi mgbe abụọ jQueryUI nsụgharị na-gụnyere, tumadi maka WordPress 3.2.x
Ofu wijetị iwepu [Asụsụ] nke ịnyịnya na-adọkpụ dị ka e kwuru site Philip Trauring
Idozi gbajiri saịtị maka ọrụ na-eji wijetị ọrụ ozugbo
Anyị na-atụ anya ka ị ụtọ a version
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Hapụ ọkwa, Software mmelite Akpado Na: bugfix, obere, tọhapụ
December 13, 2011 na 3:05 obi
“Ịsụgharị All Posts” button wepụrụ si Transposh ntọala panel na WordPress 3.3!
idozi ya biko
December 13, 2011 na 3:12 obi
Ọbụghị ncha ncha, na-aga na ihuenyo nhọrọ na n'elu peeji nke na-eme n'aka abụọ ogidi na-ahọrọ.
-Agba egwú anwụ na-acha na-ekwu,
December 13, 2011 na 4:34 obi
New version agbakwụnye ọzọ meta uru ọ bụla sụgharịrị peeji nke. Na-eme ka search engines si bụghị indexing ya (amaghị ihe mere).
Biko lee anya n'ime ya.
December 13, 2011 na 4:39 obi
Ndo, na o nwere ike ịbụ ihe mere. Ma ruru ụfọdụ ihe ndị ọzọ, sụgharịa peeji nke na-agaghị na-indexed 🙁
December 13, 2011 na 8:14 obi
Dị ka m mara sụgharịrị peeji nke na-na-indexed. Transposh si saịtị webmaster ngwaọrụ egosi a ọnụego nke ~ 98% nke ibe na-indexed, na nke a bụ na nrubeisi nke a Sitemap XML nke na-agụnye asụsụ nile. I nwere ike mma gị na Ohere inweta peeji nke a sụgharịrị ịbụ site na iji flags wijetị, ma ọ bụ na-edo a ziri ezi Sitemap, Google nwekwara ike iji Asarel mkpado kwukwara na peeji nke, ma nke a bụ obere ụfọdụ.
December 16, 2011 na 12:18 obi
M hụrụ naanị bekee ọdịnaya sitemap.xml (XML-Sitemap Gen 3.2.6) . Olee otú iwekota ọdịnaya ọtụtụ asụsụ na “ịsụgharị niile” na sitemap.xml?
Daalụ maka gị mma plugin 😀
December 25, 2011 na 12:25 na
Biko soro ntuziaka na FAQ maka patching XML-Sitemap
December 14, 2011 na 2:29 obi
Daalụ maka update. Olee otú m na-agbanwe dropdown ka flags? Ọ bụghị gị FAQ si. Kedu PHP m dezie?
December 14, 2011 na 2:46 obi
Ị adịghị mkpa na FAQ, ejikari nnọọ na ị ga họrọ kwesịrị ekwesị wijetị dị ọdịdị / wijetị menu.
December 14, 2011 na 3:19 obi
Ma, m na a na-inbedded m nkụnye eji isi mee m adịghị eji site wijetị dị ka ọ mere ka nsogbu tupu. Olee otú m ga-agbanwe flags na nke a? Daalụ
December 14, 2011 na 4:13 obi
N'ezie nke a adịghị egosi na FAQ, ịgbanwe gị nkụnye eji isi mee ya
Fabrice Meuwissen na-ekwu,
December 14, 2011 na 9:38 obi
Banyere flags wijetị, ị maara na ọ na-flagged dị ka selata page ọsọ ( google SEO )
na-na onye ọ bụla nwere ike na-arụ ọrụ imelite akụkụ a nke koodu ?
ịhụ screenshot si google akụkọ ( ndo maka ọjọọ na-achọ url 🙂 ) :
December 14, 2011 na 10:02 obi
E nwere ihe abụọ wijetị, na na na-na-enweghị CSS sprites, ma ọ bụrụ na ị chọrọ a ngwa ngwa otu, na-eji CSS version
December 15, 2011 na 12:08 na
ụchụ, M m onye iberibe, Amaghị m ihe ndị 2 wijetị, ugbu a, m google page ọsọ maka http://www.obviousidea.com si n'ọnwụ 86/100 ka 92/100 na naanị mgbanwe a !!! unbelievable !
n'agbanyeghị, anyị emelitere taa Transposh na wordpress 3.3 ị pụrụ ịhụ na ọ na-arụ ọrụ 🙂
December 21, 2011 na 6:45 na
M nwere di na nwunye nke gbara ajụjụ. Apụ, ọ bụ na o kwere omume n'ihi na onye na-asụgharị m peeji nke site Transposh. M pụtara maka enyi n'ụzọ ziri ezi ịsụgharị / ịgbanwe ha, ma ha ka na-eji Transposh wijetị?
Nke abuo, M na-enwe otu nke na m na FB dị ka ngwa mgbakwunye o yiri ka a ga-n'ịkpa Portuguese ọkọlọtọ si Transposh dị ka m tọmbneelụ na ndị mmadụ facebook mgbidi. Ị maara ihe ọ bụla banyere nke a ma ọ bụ ma ọ bụrụ na e nwere ụzọ ịkwụsị ya na-eme?
Daalụ maka oge gị, ọ na-mgbe kpọrọ ihe nke ukwuu.
December 25, 2011 na 12:28 na
N'ihi na mbipụta mbụ, ị nwere ike mgbe niile na-enye enyi gị na otu akaụntụ gị na saịtị na nsụgharị ikikere, M kwere na nke a ga-eme ihe ị chọrọ.
Banyere nke abụọ ihe, Amaghị m ihe m na plugin, na mma na ime ihe bụ na ị mepụtara a tiketi anyị na anyị na mmepe nkesa, anyị ga-ịga ya na oge.
December 28, 2011 na 12:10 obi
Ndewo, M nwere oké njọ 404 Ahụghị na Unreachable ụdị Google Web Master Ngwaọrụ, Ahụghị(24,206)‎, Unreachable(21,368)‎ . Ọ na-egosi kwa ụbọchị. Ugbu a, m visittor na ogo na google dobe ukwuu.
Biko na-atụ aro m na-ekpo ọkụ na-edozi nsogbu a. Ma na-ekele gị nke ukwuu maka enyemaka gị.
January 6, 2012 na 1:18 na
Jiri kọntaktị na ụdị na-eziga anyị ụfọdụ sample data na anyị ga-ahụ ihe anyị nwere ike ime.
January 4, 2012 na 8:44 obi
Ma ị na-eme atụmatụ iji imeghari Transposh maka phpbb3 engine?
January 4, 2012 na 8:50 obi
Ee, ọ na-zubere, chọrọ inyere?
January 4, 2012 na 10:43 obi
Ee, Ga-amasị m na-enyere, ma amaghị otú. M a PHP Programmer.
January 6, 2012 na 1:15 na
Nke a bụ ezi afọ ọhụrụ mkpebi 😉 ịmụta ụfọdụ PHP mmemme na-arụ ọrụ na nke a oru ngo. Aga m na-enwe obi ụtọ na nyere gị aka ebe a na-.
January 8, 2012 na 9:32 na
Ndewo, M nnọọ chọrọ melite nsogbu m na ofu.
1. M na-eji Google (XML) Sitemaps Generator 4.0b8 beta, Ọ na-amụba index page ukwuu.
2. M gbanwere W3 Total Cache Ndenye Cache, nke ahụ bụ ojiji maka 3 afọ. Ndenye Cache mma karịa W3TC na okwu nke ọsọ na ịsụgharị ngwa ngwa (karịa W3TC). Akwado site Google Webmaster Ngwaọrụ – Iri ari stats na mgbe m na-eji W3TC, Time nọrọ nbudata a na peeji nke-abawanye 2000ms si <200MS, ugbu a, ọ belata mgbe m Switched Ndenye Cache. N'ihi na m na nke a plugin adabara na Transposh.
3. 404 ahụghị ka nwere nsogbu. M ga-nyochaa 3-4 ụbọchị ọ bụrụ na ọ bụghị belata, m ga-ajụ gị ọzọ.
January 8, 2012 na 10:01 na
Yossawat, nwere ike ị na-eziga na njikọ nke saịtị weebụ ma ọ bụ na peeji nke, Ga-amasị m na-elele, M na-eji w3 ngụkọta cache na Transposh onwe m, kemmasi ịhụ ihe nwere ike ịbụ nsogbu gị.
January 8, 2012 na 6:49 obi
Daalụ nke ukwuu Fabrice Meuwissen, Ugbu a, m dochie W3TC site Ndenye Cache.
January 8, 2012 na 8:11 obi
eme Ndenye cache ahụ na-CDN ka Amazon S3 & cloudfront ?
Lars Erik Morin na-ekwu,
January 10, 2012 na 4:53 na
Gị translation ọrụ bụ kpam kpam mkpari. Ikekwe ọ bụ ọbụna ihe nzuzu nsụgharị English ka Swedish, ebe ọ bụ na ọ bụla Swede onye bụ onye nwere mmasị na “tugharia” saịtị ga-ama ọtụtụ ihe English karịa gị “ọrụ” maara nke Swedish. Ndị na-agụ ga-achị ọchị ma ọ bụ iwe, naanị ihe ha na-agaghị na-eme bụ ịghọta.
January 10, 2012 na 11:30 na
M n'ezie adịghị m n'aka mere m mma a ikwu, ọ bụ ihe dị mma ma ọ bụ ihe ọmụma. Ihe m nwere ike ikwu bụ na ị na-eleghị anya nnọọ ziri ezi, akpaka translation na-emepụta results na-ekwesịghị ịdị na mgbe ụfọdụ ọbụna na a egwuregwu, Otú ọ dị bụ nke a mere Transposh dị, otú i nwere ike na-eji obere edit translation njikọ n'okpuru wijetị n'ezie idozi ya ma mee ka ọ ka mma, Ọ na gafere ịnọgide na-enwe abụọ mbipụta nke otu ọdịnaya na dị mma karịa akpaka translation.
Ma, n'ezie, ị na-adịghị eji ya…
January 16, 2012 na 3:06 na
Ndewo, mbụ niile m gị n'anya plugin!
Nke abụọ, M mkpa a obere enyemaka ma ọ bụrụ na o kwere omume. My saịtị na-agụnye asụsụ dị iche iche m na ndabere asụsụ bụ bekee. Mgbe m ịgbanwee gaa na asụsụ dị iche karịa bekee na plugin mgbe nile ịsụgharị ihe niile. Ihe bụ nsogbu bụ na m ga-amasị plugin ịsụgharị ọbụna ndabere asụsụ (English) atọrọ, n'ihi na m enyi pịa ọrụ ọ bụghị ndị niile Ndenye bụ otu asụsụ. Ihe niile na-arụ ọrụ ezi na asụsụ nile ma ndabara. Enwere m olileanya na m doro anya, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ị nwere ike ịlele na m na saịtị faceboooh.com.
January 16, 2012 na 9:53 obi
M na-enwe otu nke na kọrọ ya (na anọwo na email nkwurịta okwu na Ofer) na mbụ dị ka nke ọma.
Ma eleghị anya, ndị na-esonụ ga-enyere Ofer? M na nso nso arụnyere WP-FB-AutoConnect, na ihe ọ bụla m mere, M wee na-adịwanye a webpage na kwuru, “Biko adịghị nweta a edemede ozugbo.” Site ukwuu ntutu-Anam Udeme, M chọpụtara na plugin mere n'ezie abanye m ka m m na saịtị site na m FB akaụntụ; Otú ọ dị, M na-adịghị eme ibugharị ka m na saịtị si homepage. The Mmepụta mesiri m obi ike na ọ ga na-arụ ọrụ.
Ya mere,, M tụgharịrị ọ bụla plugin ma malite rụọ ọrụ ha otu otu. The naanị otu na-ekweghị ka WP-FB-AutoConnect ikwubi n'ụzọ kwesịrị ekwesị bụ Transposh. M relayed a na FB plugin Mmepụta onye kwuru, sị na nke a abụghị nke mbụ na nke a na a kọrọ ya banyere Transposh.
M na-adịghị na-akụ aka Transposh. M na-eche na ọ bụ ihe dị egwu plugin. Dị ka gị, Achọrọ m na n'ezie, n'ezie na-achọ ya na-arụ ọrụ m Buddypress saịtị. Olileanya, a bit nke ọmụma ga-enyere.
January 18, 2012 na 4:29 na
Hi Quint, ekele maka gị ikwu. M nwere kpọmkwem nsogbu i nwere na WP-FB akpaaka jikọọ na mgbe akuko ka Mmepụta m mesịrị bịara agbahapụ WP-FB na dochie ya Social-Jikọọ. M n'ezie ga-amasị na-Transposh nke m hụrụ n'anya na ya ma na m olileanya na a na ebe a nwere ike inye anyị a obere enyemaka.
February 10, 2012 na 6:35 na
Ofụri Esịt atụ anya na ị ga-agwa m na nke a bụ a nsogbu n'èzí Transposh, ma ị ga-biko dịkarịa ala nwere anya na nke a akara site njehie anyị log? Anyị na-enweta otu n'ime ndị a ọ bụla nke abụọ.
[09--Ahụ-2012 14:39:05] PHP Warning: Edidomo ekenye onwunwe nke na-abụghị ihe na /home/apexwpa2/public_html/wp-content/plugins/transposh-translation-filter-for-wordpress/core/parser.php na akara 656
February 10, 2012 na 11:56 obi
Amaghị ihe mere ọ ga-eme, kasị mma nzọ bụ nanị ebelata njehie iji PHP si @ ntụziaka
February 10, 2012 na 12:18 obi
M na-ehichapụ a otutu isiokwu site m blog.
Echere m na nke nke tebụl na Translation translationlog ebelatawo, ma ọ bụ.
M na-eche na e nwere ekpe nsụgharị na nchekwa data na-abaghị uru.
E nwere ụzọ iji kpochapụ ndị ahụ na ndị belata nchekwa data?
P. S.: a plugin dị ukwuu!
February 10, 2012 na 11:46 obi
Ọ bụ ezie na adịghị m kweere na size nke nchekwa data mkpa ukwuu taa na mba gburugburu, ọ pụrụ n'ezie ịbụ ihe amamihe ime ụfọdụ cleanups na ọnọdụ gị, na ọnọdụ na peeji nke, M atụ aro ka ị-ewepụ ihe niile na akpaaka nsụgharị tọrọ 14 ụbọchị, echegbula ukwuu ma ọ bụrụ na ị hapụ ihe ọ bụla na akpaaka translation-eji ka ndị a ga-ewughachi otu obula.
February 10, 2012 na 2:29 obi
My enyi na-edezi translation dị ka amaonye. Ọ na-adịghị ite m dashboard. The nsụgharị e nwere mgbe m na ite ke ma ozugbo m apụ ha na-adịghị n'ebe. Ọ bụ n'ebe ahụ a ọnọdụ ma ọ bụ igbe na-elele ebe m ga-anabata ha ma ọ bụ mee ka ha na-ebi ndụ? M bụ n'okpuru echiche na onye ọ bụla pụrụ dezie ma na-ekwusa nsụgharị? Ọ bụla ndụmọdụ ga-nnọọ uru dị ka mgbe niile.
February 10, 2012 na 11:44 obi
Ị nwere ike a caching plugin a na-adịghị na-enweta ume ọhụrụ, nke a bụ ihe kasị mma m nzọ ebe a
February 10, 2012 na 11:47 obi
Daalụ ofer! Anyị nwere W3TC, ma ọ bụrụ na ị maara nke ọ bụla okwu ọ na-akpata na Transposh, biko mee ka m mara.
February 11, 2012 na 3:10 obi
M na nkwarụ na TP_ENABLE_CACHE na constants.php (gbanwere ụgha) na-ehichapụ cache (WP ibu cache) ma ka nsogbu na-anọgide. M Kwesịrị tinye transposh.js ka jụrụ onye ọrụ mmadụ?
Lars Rönnbäck na-ekwu,
February 19, 2012 na 10:25 na
M abụọ mbipụta. Akpa, M bịanyere aka elu maka Bing Asụgharịa API na Windows Azure Ahịa na depụtaghachiri akaụntụ isi n'ime MSN API isi ubi ke Transposh Ntọala. M kweere na nke a ga-eme ka o kwe omume iji free translation awa nke 2 nde odide. Otú ọ dị, ihe ọ bụla na-akawanye sụgharịrị. Mgbe m pịa “Asụgharịa niile Ugbu a” button ọ dị nnọọ n'oge mgbe ise mgbalị.
Nke abuo, na popup window nke m aka dezie nsụgharị yiri ka nwere a ala z-index uru. Nhọrọ na ihe oyiyi-egosi na n'elu ya, na-eme ka ya ike iji. The isiokwu Ana m eji bụ “Iri abụọ iri na otu 1.3”, na-ekwesịghị ịbụ na osisi, na-ewere na ọ na-mepụtara site na WordPress otu.
February 20, 2012 na 11:17 na
I eleghị anya ọ bụghị depụtaghachiri API igodo Bing n'ụzọ ziri ezi, na ị na-na-ghara ịdị irè AppID, otu obula – ọtụtụ ikpe ọ bụghị mkpa na-eji ya mgbe niile, i nwere ike dị ahapụ ubi oghere.
Banyere z-index, Echere m na ị na-ezi, na a ga-ofu ke ọbịbịa nsụgharị
February 20, 2012 na 4:21 obi
M banyere API isi n'ihi na m chere na ọ bụ chọrọ. M nwere otu nsogbu ma ọ bụrụ na m na-ewepụ ndị isi, na “Translation na-ezughị ezu” na Timeout mgbe ise mgbalị, ma na Google na Bing. M na-agbalị reinstalling, okodorode niile akpaka nsụgharị, na ịpị fix njehie site gara aga nsụgharị button. N'agbanyeghị adịghị laa. M na e-agba agba Transposh ruo ogologo oge.
Daalụ maka ịrụzi na z-index na-esonụ version!
February 21, 2012 na 8:21 na
Google ịsụgharị-adịghị arụ ọrụ gị na saịtị n'ihi na ị-akọ curl n'ọbá akwụkwọ nkwado na gị na ihe nkesa, MSN na-eme n'ezie ọrụ, na m na-ahụ a obere ahụhụ kpughere na nhọrọ nke a ndabere engine, ị nwere ụzọ abụọ idozi nke a ugbu a – otu – wụnye curl, na abụọ, họrọ Bing dị ka ndabere gị nchọgharị na mwube gị na peeji nke.
Biko-m na-ezitere na otú o si na-arụ ọrụ
February 21, 2012 na 5:17 obi
Daalụ nke ukwuu! A mfe 'apt-esi wụnye PHP5-curl’ mere na atọ 🙂
March 4, 2012 na 10:13 obi
M arụnyere a ọhụrụ mbipute nke Transposh na m website (www.duttotech.com) ma sụgharịa asụsụ English na Italian na-adịghị indexed na google…
ka m ga-gbanwee ụfọdụ maka na?
April 29, 2012 na 12:22 na
Dị ka m, mgbe ụfọdụ Google na-ewe ya oge, M na-ahụ English peeji nke gị na saịtị na-indexed site ugbu a…